Esory ny rindranasa na ny programa amin'ny Mac fa tsy mamela soritra. | Avy amin'ny mac aho
Nampiasa ny Mac vaovao anao ianao nandritra ny fotoana fohy ary tonga ny fotoana tianao esorina ny iray amin'ireo programa, fitaovana na rindranasa izay anananao ao amin'ilay rafitra ary tsy fantatrao ny fomba hanaovana azy mba ho tanteraka. nofoanana. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy marihintsika izany fanesorana fampiharana na programa amin'ny macOS dia tena mora tokoa ary tsy mila mieritreritra be loatra na manasarotra ny fiainanao mihintsy.
Tahaka ny fametrahana ireo rindranasa ireo dia asa tena mora, haingana sy madio, rehefa tsy maintsy ataontsika tsy misy azy ireo dia mitovy ny mora sy ny hafainganana. Raha fintinina, tsy mila fangatahana antoko fahatelo izahay hanafoanana ireo programa, tsy mila mieritreritra ihany koa fa mety misy tavela amin'ireo fampiharana voafafa satria ny rafitra miasa no tompon'andraikitra amin'ny famongorana ireo sisa tavela, fa raha mbola te hampiasa rindranasa manokana hanafoanana ny rindranasa isika dia afaka manao azy koa.
1 Esory ireo fampiharana tsy misy fampiharana an'ny antoko fahatelo
1.1 Ny safidy hamafana ny fampiharana dia tsy hita
2 Andao hanomboka amin'ny CleanMyMac
3 AppZapper no fampiharana manaraka
4 AppCleaner no fahatelo arosonay
5 Mamintina kely
Esory ireo fampiharana tsy misy fampiharana an'ny antoko fahatelo
Araka ny nambaranay tamin'ny fiandohan'ity lesona ity dia misy ny fampiharana an'ny antoko fahatelo afaka manafoana ireo fampiharana avy amin'ny ekipanay fa ny dingana voalohany dia ny mahita fa tsy tena ilaina ireo rindranasa ireo satria afaka manafoana mivantana isika fotsiny amin'ny fitarihana mankany amin'ny fako na amin'ny fisafidianana ilay rindranasa tiantsika esorina amin'ny Launchpad.
Ianaro ny fomba handika ny lalana feno fisie na folder mivantana avy amin'ny Finder
Ity ho ahy ny safidy tsara indrindra ary hanatanterahana izany dia mila miditra fotsiny isika Launchpad> Fihazonana fampiharana iray (toy ny amin'ny iOS) dia hiseho ilay "shaky X" tsindrio eo dia hamafana azy.
Ny safidy hamafana ny fampiharana dia tsy hita
Mety misy fitaovana na rindranasa sasany ananantsika ao amin'ny Launchpad, indrindra ireo izay tsy tonga mivantana avy amin'ny Mac App Store- alaina mivantana avy ao amin'ny tranonkalan'ny mpanabe. aza aseho izany "shaky X" eo amin'ny zoro ambony ambony na aza avela esorina amin'ny "fitarihana mivantana any amin'ny fako" izy ireo.
Amin'ity tranga ity dia mila mivoaka ny Launchpad amin'ny fomba tsotra isika tadiavo ny kisary fampiharana mivantana avy amin'ny Finder anay. Afaka manao izany mivantana avy eo amin'ny fikandrana Finder na mivantana isika fidirana amin'ny folder Applications ary avy eo dia tsotra toy ny misintona mankany amin'ny fitoeram-bokatra ary hofoanana ho azy avy amin'ny Mac sy ny Launchpad.
Izaho manokana dia afaka milaza fa io fomba io no nampiasako hatry ny ela hamafana ny rindranasa ao amin'ny Mac, fa afaka mampiasa rindranasa hitantsika ao amin'ny Mac App Store sy ivelan'io izahay hanatanterahana ny fanesorana. Ity dia zavatra tena manokana ho an'ny mpampiasa tsirairay ary na izany na tsy izany ny zavatra mahaliana momba izany dia raha isaky ny mitsambikimbikina ny rafitra fiasa vaovao toa ilay ho avy izao manomboka amin'ny macOS Sierra ka hatramin'ny macOS High Sierra dia manao fametrahana madio ny rafitra isika, tsy mampiasa tombony ny fampiasana rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo. Raha, etsy andaniny, tsy mametraka ny OS misy antsika velively isika, azo atao fa ny sasany amin'ireo rindranasa izay ho hitantsika etsy ambany dia safidy tsara kokoa, saingy tsy azo zahana ihany koa izany.
Andao hanomboka amin'ny CleanMyMac
Ity dia iray amin'ireo rindranasa hitantsika tamina fotoana maro tao amin'ny Soy de Mac. Mazava ho azy, ny zavatra tsara indrindra momba ity fampiharana ity dia ny ahafahantsika manadio lalina kokoa amin'ny Mac, mihoatra ny fanesorana ireo rindranasa na fitaovana napetraka fotsiny. Voaloa ny fangatahana ary tsy hoe mora vidy izy io nanomboka teo Manana ny vidiny 31,96 euro, fa miaraka amin'izany no ahafahantsika manafoana, ankoatry ny rindranasa izay tsy tadiavintsika intsony, hanadio ny fitaovantsika amin'ny ankapobeny.
Fa izao andao jerentsika ny fomba fanesorantsika mivantana ireo rindranasa amin'ny CleanMyMac 3, izay ilay kinova azo jerena mivantana ao amin'ny Tranonkala mpamorona MacPaw. Ity fampiharana ity dia tsy nisy tao amin'ny Mac App Store nandritra ny fotoana kelikely, fa azo atokisana ny mpamorona.
Manokatra CleanMyMac 3 3.8.4 izahay izay dikan ankehitriny ary mandeha izahay Fitaovana ao amin'ny menio havia ambany ary tsindrio Uninstaller. Hiseho sy tsotra ireo rindranasa napetrakao amin'ny Mac Misafidy rindranasa iray na maromaro isika amin'ny fotoana iray ary tsindrio ny Uninstallation feno. Ho hitantsika fa miseho ny fisie auxiliary Files na Prefers amin'ilay rindranasa izay hofoanana ho azy koa.
Ity dia iray amin'ireo rindranasa nampiasako ary tena mandeha tsara izy io, saingy mieritreritra aho fa ny fanesorana ny rindranasa fotsiny dia tsy ny safidy tsara indrindra noho ny vidiny. Mazava ho azy, manolotra antsika izy io interface tsara sy milamina manompoa hitandrina ny Mac anao ho madio.
AppZapper no fampiharana manaraka
Ity dia rindranasa mifanohitra tanteraka amin'ny CleanMyMac 3. teo aloha. Amin'ity tranga ity ny fampiharana izay misy ihany koa ivelan'ny fivarotana fampiharana Apple, manana interface taloha, azontsika atao aza ny milaza fa efa lany andro ary tsy nahazo kinova vaovao nandritra ny fotoana ela.
Etsy ankilany, izany rehetra izany ny interface sy ny hafa izay toa ratsy dia ratsy amin'ny voalohany Fampiharana AppZapper, mifanohitra mivantana amin'ny ffampiasa sy fanamorana ny fampiasana ny fampiharana. Raha vantany vao manokatra ny rindranasa izahay dia miseho io varavarankely io izay ahafahantsika manomboka mamafa ny apps:
Notaritarinay mivantana ilay rindranasa hamafana ary dia izay ihany. Azontsika atao koa anefa izany kitiho ny «switch» izay hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony ary ho hitantsika ireo rindranasa rehetra napetraka tao amin'ny solosainay. Raha vantany vao tsindrio ilay tianao hamafana dia ampiarahina ireo tranomboky, ny fisie an'ny log, .plist, sns, izay matetika apetraka amin'ny tsirairay amin'ireo rindranasa ao amin'ny solosaintsika ary tsindrio ny "Zap!"
Ny fampiharana dia hesorina amin'ny ekipanay.
AppCleaner no fahatelo arosonay
Ny farany amin'ireo rindranasa izay tianay hizara aminareo rehetra dia fampiharana taloha ihany koa amin'ny asan'ny famafana fampiharana ary eo ivelan'ny fivarotana fampiharana Apple ofisialy. Raha izany dia AppCleaner Manolotra antsika interface iray tena mitovy amin'ny rindranasa teo aloha sy rafitra iray hanafoanana ireo fampiharana. Ity rindranasa ity dia iray amin'ireo izay nampiasaiko kely indrindra manokana nefa manatanteraka ny asany ary koa ny fampiharana hafa izay hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny mampiavaka ny AppCleaner dia rehefa misintona azy avy amin'ny tranonkala dia tsy apetraka ao amin'ny folder Applications misy antsika, tokony hamonjy azy io amin'ny tanana isika. Vantany vao voavonjy isika dia manatanteraka azy ary hiseho amin'ny interface toa ny AppZapper, hisintona sy hamafa:
Manana ny lisitry ny rindranasa napetraka ao amin'ny Mac koa izahay raha tsindrio ny bokotra ankavanana ambony. Raha vantany vao manana ny lisitry ny rindranasa isika dia mila misafidy fotsiny ireo rindranasa tiana hamafana ary dia izay:
Raha fintinina, afaka mampiasa ireo na rindranasa hafa misy izahay hamafana ireo fampiharana avy amin'ny Mac-nay, fa ny tsara indrindra ho an'ity asa ity (miteny manokana) dia foanae ny endrika natioran'ny rafitra macOS anay ary io dia tsotra be ny manao azy ary tsy mila mampidina na inona na inona amin'ny solosaintsika isika. Avy eo misy ny rindranasa toa ny CleanMyMac izay manolotra ambaratonga safidy hafa misy ankoatry ny fanesorana ireo rindranasa, fa amin'ny farany ny zavatra tadiavintsika amin'ity tranga ity dia ny fanesorana ireo rindranasa izay tsy ampiasainay ary tsy hitantsika fa ilaina ny mametraka na inona na inona. Toy ny mitranga matetika amin'ireto tranga ireto, ny fanandramana ny loko ary malalaka ny olon-drehetra hahazo an'io karazana fampiharana io amin'ny Mac azy, fa voalohany afaka manamafy isika fa tsy ilaina izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Esory ireo programa na rindranasa amin'ny Mac
lahatsoratra tsara. Vao nividy mac aho ary very ny antsasany. tonga ny fotoana hanadiovana kely.
Miguel Leon dia hoy izy:
Lahatsoratra iray tena tsara, tena ilaina ho fantatra amin'ny programa izay mamela anao hanaisotra ny rindranasa nefa tsy mamela soritra.
Ny olana mahazo ahy dia ny nanesorako programa tsy mandeha tsara ny famerenako azy indray, fa rehefa manandrana aho dia tsy avelan'ny mac aho ary milaza amiko fa efa napetraka izy io, ary rehefa avy nitady aho dia tsy nahita. sisa tavela aminy. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Miguel León
Nividy iray efa ho roa taona lasa izay aho ary niasa tamin'izy ireo, efa nianarako zavatra maro izay tsy fantatro ary manohy izany aho, saingy tamin'ny farany dia tena nilay vola ity solosaina ity. arahabaina
ichocobo dia hoy izy:
avereno amin'ny masinina ara-potoana ny programa, ary avy eo ampiasao appfixer na hamafana mivantana ireo safidin'ny tranombokin'ny mpampiasa anao.
Mamaly an'i ichocobo
Salama tsara ry andro !!!. Manontany aho fa tsy afaka mamafa na esorina ny oovoo sns ... tadiaviko
Misy amin'ireto programa ireto hamongorana ny rindranasa, hanafatra rakitra sns, fa amin'ny Espaniola ??? Ankasitrahako ilay fampahalalana. Misaotra anao
lorenitaduque dia hoy izy:
hainao hoe maninona Safari no manokatra lalao sy pejy dokambarotra be dia be
Mamaly an'i lorenitaduque
Maria de la Luz dia hoy izy:
Voa ianao !!
Valiny tamin'i Maria de la Luz
Diego Ferreira Silva Do Amaral dia hoy izy:
Tsy azoko esorina ny ZipCloud amin'ny mac-ko, ahoana no hataoko? misaotra
Valiny tamin'i Diego Ferreira Silva Do Amaral
Voa aho, ahoana no fanadiovako azy?
Oswaldo molano dia hoy izy:
Tena nahasoa ahy io.
Mamaly an'i Oswaldo Molano
Manoratra an'io aho satria nitranga tamiko omaly ary nandany fotoana be aho vao nitady ny vahaolana. Hay nivadika rindranasan-tsary ho an'ny mac aho, ary rehefa nosokafako dia hitako fa tsy izay no tadiaviko. Ka nanao ny nataoko foana aho, tao amin'ny fisie fisie no nahitako ilay rindranasa hamafana, notsindriako tamin'ny totozy io ary notaritaritiko ho any am-pako. Miseho ny varavarankely kely isaky ny manandrana mamafa azy aho izay nangataka tamiko ny tenimiafin'ny Finder mba hamafana azy. Apetrako ny hany ananako, izay mpitantana ny mac-ko, izay ilay manontany anao rehefa misintona fampiharana ianao, eny, tsy nisy lalana. Ny solosaina dia niasa tsy niasa, fa tao an-tsaiko nilaza tamiko fa tsy maintsy misy rafitra izay hamela anao hamafa. Niditra tao amin'ilay rindranasa aho fa tsy fantatro hoe impiry mba hahitako raha afaka mahazo zavatra manokana aho, ary ny fikorontanana dia hitako fa napetraka teo am-baravarankely fa voasakana ilay rindranasa ary nahazo fanitsiana lahatsoratra miaraka amina programa izay inoako fa HTLM. Mandrosoa, tsy misy hevitra maharatsy. Nahita zavatra marobe koa aho teo momba ny fametrahana lahatsoratra HTLM eo am-baravarankely, fa satria tsy dia azoko loatra ny momba ny mac, dia naleoko nitady foana. Amin'ny farany dia hitako foana. Io no hadalana lehibe indrindra nisy ary izao manaraka izao: Akariho ny fampiharana mankany amin'ny Launchpad ary tazomy amin'ny totozy, ary vonoy avy eo. Hitako ny fomba nandehanany nivantana tany amin'ny fako ary nofafany, nijery talohan'izay fa tsy ao anatin'ny lisitry ny rindranasa intsony. Ary dia izay. Manoratra an'ity rehetra ity ho mpanampy aho, raha sanatria misy olona tonga amin'izany fotoana izany. Misaotra anao niaritra ny olana rehetra nataoko taminao.
Manamarina aho raha misy rindranasa alaiko avy amin'ny App Store, dia tsy avelako hamafa azy io, saingy miaraka amin'ny rafitra voasoratra teo aloha, izany hoe ny mamafa azy amin'ny Launchpad. Azoko ny varavarankely izay milaza ara-bakiteny izao manaraka izao: TE HANOVA NY FITIAVANA. Ampidiro ny TENY FENO FENO HAHAFETANA ITY OPERATION IZAO. Anaram-bosotra ***** Misy olona afaka milaza amiko ve hoe maninona no mitranga amiko izany? Misaotra indrindra anao.
Miarahaba antsika rehetra tena ilaina daholo izay asehon'izy ireo, saingy milaza aminao aho fa hanolotra ny macbook 2015 novidiko aho ary mila ny mifanohitra amin'izay ambaran'izy ireo…. Mila mamafa ireo sary, data, sns aho, avelao hadio izy io fa tsy mamafa ny rindranasa, azafady azafady azafady
Misaotra appzapper niasa ho ahy.
Misintona endritsoratra maimaim-poana 12 mandritra ny fotoana voafetra miaraka amin'ny Font Calligraphic
OWC dia manamafy fa ny 27 "iMac vaovao rehetra dia afaka mametraka RAM hatramin'ny 64GB